amathiphu aphezulu wokubhonqa - umenzi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
amathiphu aphakamisa ukuvama
Ukudonsa amathiphu we-Brazing Steel
Izindleko ze-Brazing Steel Izindleko nge-Hihg Frequency Heating System
Inhloso Ukushisa ithiphu yensimbi nomhlangano we-shank uye ku-1300 ° F (704 ° C) kungakapheli imizuzwana emi-3 yokubopha nge-induction heating esikhundleni sethoshi.
Ithiphu yensimbi yensimbi engu-0.1 ”(2.54mm) yensimbi & shank, i-0.07” (1.78mm) ring ring braze ring
Izinsiza ze-DW-UHF-4.5kW uhlelo lokushisa lokungeniswa, isiteshi sokushisa esikude esiqukethe i-1.2 microfarad capacitor eyodwa.
Inqubo I-coil yama-helical amabili asetshenziswayo ukubopha izingxenye zamazinyo. Indandatho yokubopha ibekwe endaweni ehlanganisiwe yethiphu yensimbi ne-shank. I-Black flux isetshenziswa endaweni ehlanganisiwe. Amandla we-RF asetshenziselwa imizuzwana emi-3 ukushisa izingxenye ekushiseni kwelitshe elisunguliwe futhi ukunamathisela kwe-braze kugeleza ngokulinganayo nangokungaguquguquki.
• Ukukhula kwamazinga okukhiqiza kanye nezindleko zomsebenzi ezinciphile
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi amathiphu aphakamisa ukuvama, insimbi yokufaka ibhande, Amathiphu wokufaka ubhontshisi we-induction, amathiphu wokubhakanyiswa kwe-induction, Ama-RF amathiphu okubhinca